Home Somali News Kenya: “Haddaanay Qaramada Midoobay 3 Bilood Ku Rarin Qaxoontiga annaga Gacantayada Ku...
treet scene in Dadaab refugee complex, Kenya © Aden Hassan Tarah/irinnews
Dawladda Kenya ayaa Qaramada midoobay u qabatay inay muddo saddex bilood ah ku rarto Qaxoontiga Soomaalida ah ee degan xerada Dhadhaab. Kenya ayaa sheegtay in haddii Hay’adda UN-ta u qaabilsan qaxoontiga ee UNHCR muddadaas ku rari waydo qaxoontiga dawladda Kenya gacanteeda ula tagi doonto.
Go’aanka dawladda Kenya ayaa ka dambeeyay weerarada Al-shabaab kaga imanaya ee kii u dambeeyay lagu qaaday Jaamacadda Garissa oo 148 qof ku dhinteen “Qaxoontiga oo meesha laga saaraa, waxay xooggaga amaanka u suuro galinaysaa inay helaan xubnaha argagixisada ah ee iyaga(Qaxoontiga) ka dhex imanaya”, ayuu yidhi Madaxweyne xigeenka Kenya William Ruto isagoo arrintan sabtidii ka hadlayay.
Mr Ruto, waxa uu intaasi raaciyay “Waxaanu Hay’adda qaxoontiga aduunka(UNHCR) waydiisanay inay muddo saddex bilood ku siman ku rarto qaxoontiga, haddii ay ku fashilanto raristoodana annaga laftayada ayaa rarayna”
Hay’adda Qaxoontiga Aduunka UNHCR, oo maamusha xeryaha Qaxoontiga oo Nus malyan Soomaali u badan ku jiraan ayaan wali ka hadal dalabkan Kenya.
Madaxweyne xigeenka Kenya, waxa uu sheegay inaanay ahayn in la siyaasadeeyo arrimaha amaanka. Waxa uu sheegay in dhamaan bulshada Kenya ay taabatay dhimashada 147 Arday oo lagu dilay weerarkii Garissa. Waxa uu guud ahaan bulshada Kenya gaar ahaana hogaamiyeyaasha ugu baaqay inay ku taageeraan dawladda sidii Al-shabaab ay iskaga celin lahayd.
William Ruto, ayaa sidoo kale sheegay in dawladdiisu bilawday dayrka Kenya ka wado xuduudka Somalia iyo Kenya, kaasi oo loogu talo galay inuu difaac u noqdo Kenya, maadaama Al-shabaab weeraro ku hayso tan iyo sanadkii 2011-ka oo Ciidamada Kenya galeen Somalia.